Mitaintaina ny mpamokatra: hakana TVA 20% ny katsaka sy ny hafa | NewsMada
Mitaintaina ny mpamokatra: hakana TVA 20% ny katsaka sy ny hafa
Hampiaka-bidy ny vidin-katsaka sy ny vokatra miankina aminy ny volavolan-dalàna voasoritra ao anatin’ny Tetibola 2020, hanisy tataon-ketra TVA 20%. Ho an’ny Malagasy matihanina amin’ny fiompiana (MPE), vahaolana ny hampiakarana ny hetran’ny vokatra hafa fa tsy ity akora fototry ny fambolena sy ny fiompiana ity.
Manaitra ny fanjakana hijery akaiky ny lalam-pihariana katsaka ny Malagasy matihanina amin’ny fiompiana (MPE). Fantatra fa ao anatin’ny volavola Tetibola 2020 ny hampiharana tataon-ketra TVA 20% amin’ny katsaka amidy eto an-toerana sy ny vokatra hafa toy ny faika (soja, voanjo, …), fampiasa amin’ny famokarana sakafom-biby sy ny provandy. Hitombo 25 hatramin’ny 40% ny vidin’ny sakafom-biby raha mihatra io tatao io, ary hamono antoka ny mpiompy satria hiakatra hatrany amin’ny 50% ny vidin’ny vokatra ho an’ny mpanjifa. Efa ambany anefa ny fahefa-mividin’ny Malagasy ka vao mainka hidina ny tahan’ny fanjifana.
Vokany, ho maro ny mpiompy miankina amin’ny katsaka sy ny mpamboly azy tsy hanao ity fihariana ity intsony ka hiova seha-pihariana hafa. Na koa, voatery hitady akora hafa hatao sakafom-biby. Tsy misy firenena manisy tatao TVA ny katsaka toy izao anefa any ivelany.
Hitombo 7% ny masonkarena
Araka ny fanadihadian’ny mpisehatra amin’ny famokarana sakafom-biby, ho tafakatra 130 700 Ar ny vidin’ny provandy iray gony, raha 120 700 Ar amin’izao fotoana izao, izany hoe, hihoatra 10 000 Ar/gony. Ho an’ny mpiompy akoho fakana nofo, voatery hitombo ny isan’ny andro hiompiana ny akoho ho 42 andro mba hiakatra ho 2,3 kilao ny lanjan’ny akoho iray, raha 35 andro ny fanaony. Tsy maintsy amidiny, miampy 7% ny kilaon’ny akoho (7 500 Ar/kg) raha 7 000 Ar/kg tsy misy TVA. Nampihena ny vokatra ny bibikely olitra (chenille legionnaire) nanapotika ny voly katsaka ka nampidangana ny vidiny ny taona 2019.
Ho an’ny MPE sy ny mpamboly ary ny mpiompy, tsy mety ary mila ajanona ity fikasana hanisy TVA ny katsaka sy ny faika ity. Vahaolana aroson’izy ireo ny hampiakarana ny hetra any amin’ny sehatra hafa, toy ny fifandraisan-davitra, ny toaka sy ny sigara, sns.